Kacdoonadii Shacabka Ogadenia oo Dhul Badan Kufaafay. | ogaden24
Kacdoonadii Shacabka Ogadenia oo Dhul Badan Kufaafay.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ayaa sheegaya in kacdoonadii shacabku ay kufideen deegaano aad ubadan cusub oo katirsan wadanka lagumaysto ee Ogadenia.
Sida aan lawada soconay kacdoono waawayn oo lagu diidan yahay maamulka Jigjiga iyo kooxda EPRDF ee soo dirsatay ayaa todobaadkan kasocday Gobolka Shiniile (siti) ee galbeedka Ogadenia waxaana lasoconay in shacabka ree Shiniile ay maamul kusheega Gobolka kajira kacaydhiyeen inta badan Gobolka.
Kacdoono cusub ayaa laga soo sheegayaa deegaano badan oo Ogadenia katirsan waxaana kamid ah dhulka ay shalay kacdoonadu kadhaceen Dagmada Awaare ee Gobolka Jarar, halkaas oo sida lasheegayo ay dibada isugu soobaxeen dadwayne aad ubadan oo kasoo horjeeda kooxda dabaqoodhiga ah ee gumaysiga u adeegta.
Sidoo kale kacdoono shacab oo aad uwayn ayaa shalay kadhacay magaalada Raaso, waxaana lasheegayaa in dadka ree Raaso ay kujiraan abaabul ay doonayaan in ay kaga xoroobaan kooxda dabaqoodhiga ah.
Sidoo kale waxaa dibada isugu soobaxay dadka shacabka ah ee kudhaqan magaalada Dhagaxle oo Dagmada Jigjiga katirsan, waxaana lasheegayaa in ciidanka Layuu Police ka looyaqaano ay rasaas kufureen dadkii shacabka ahaa halkaas oo ay kudhimatay haweenay 75 jir ah oo shacab ah.
Dhinaca kale dhalinta magaalada Dhagaxle ayaa dabqabadsiiyay midkamid ah baabuurtii ay wateen ciidanka Hawaarintu, waxaana lasheegayaa in uu dhamaantii gubtay.
Sidoo kale kacdoon aad uculus ayaa kadhacay magaalada Dirdabe, halkaas oo ciidamada gumaysigu ay xidheen dhalin yaro aad ubadan oo shacab ah, kuwaas oo xidhnaa funaanado uu kuqoran yahay magaca Raysalwasaaraha cusub ee Itoobiya.
Iskusoo wada duub oo kacdoonada shacabka Soomaalida Ogadenia ayaa lagu wadaa in ay kusii fidaan dhamaan dhulka Ogadenia.